Fumana Izicwangciso Zemihlaba kunye neMidwebo yeeSears kunye nezinye iiNkcazo zezindlu
Ngaba indlu yakho endala yafika "ngeposi"? Phakathi kowe-1906 no-1940, amawaka aseMantla aseMntla yaseMelika akhiwe ngokwezicwangciso ezithengiswa ngeenkampani zokuthumela iposi, njengeeSears Roebuck kunye neeWards zeMontgomery. Ngokuqhelekileyo yonke indlu yokuthunyelwa kweposi (ngohlobo lweemithi ezibhalwe ngokubhaliweyo) yeza ngesitimela somthwalo. Ngamanye amaxesha, abakhi basebenzisa izixhobo zendawo zakha ukwakha amakhaya ngokwemiyalelo yecandelo le-catalog order.
Indlu yoKhathalogi iceba ngeeSears, iiWadi zeMontgomery, i-Aladdin kunye nezinye iinkampani zazisasazwa kakhulu eUnited States naseCanada kwizinto ezibizwa ngokuba yiincwadi zeepatheni . Ziziphi ezo zicwangciso ngoku? Ukufumana izicwangciso zokuqala kunye nokufunda enye inkcazelo ebalulekileyo malunga nekhaya lakho leposi, landela amanyathelo alulwe apha ngezantsi.
Ukukhangela amaRekhodi abhaliweyo
Abamelwane banokuthi ikhaya lakho lenziwe ngamaSears, kodwa bekungalunganga. Ezinye iinkampani zathengisa iikiti zendlu kunye nezicwangciso zendlu. Ukufumanisa ukuba ngubani owenziwe indlu yakho, khangela izithuthi zemvume, izivumelwano zokuboleka imali, izenzo kunye nezinye iirekhodi zoluntu. Kwakhona ujonge iincwadi zokufunda, iincwadi zokudala, kunye nezikhokelo. Iingcebiso ezingakumbi zokukhangela kwiNdlu yakho endala kangakanani?
Khangela iziCwangciso zoMzimba
Ukukrokraza ngaphakathi kwiplasini kunye ne-attic yamanani okanye amagama atywinwe kwi-joists kunye ne-rafters. Hlola kwakhona i-hardware yekhaya kunye neendawo zokupaka iimpompo. Uyakwazi ukufumana amagama omhwebo aza kuchonga umenzi wekhaya lakho.
Gcina ukhumbule ukuba izindlu zekhathalogu ezithandwayo zazikopishwa ngokubanzi ngabakhi bendawo. Kulula ukuphazamisa ikhaya elenziwe kwendawo eyenzelwe yiiSears okanye kwiWadi. Ezinye iingcebiso zophando kwiNkqubo yoPhando loPhuhliso .
Khangela i-Catalogue ye-Intanethi
Amaphepha abalulekileyo avela kwiikhathalogu zeeplani zendlu zenziwa kwiiwebhusayithi eziliqela.
Njengoko ukhangelelanisa kula maphepha, khumbula ukuba izicwangciso zazivame ukusetyenziswa iminyaka emininzi emva kokuba zenziwe kuqala. Ngoko, ukuba indlu yakho yakhiwe ngo-1921, qiniseka ukuba uphinde uphendule izicwangciso zeminyaka yangaphambili. Nazi ezinye indawo ezifanelekileyo zokuqala:
Izikhokelo zeNdlu zeNdlu zoNxeba kwi-Index
Iincwadi zoLondolozo lweeSears - Fumana imifanekiso yeekhathalogu kunye nokunxibelelana nabanikazi bezindlu zee-mail ze-Sears Mail Order
Dlulisa amehlo kwiCatalog Catalog
Ayikwazi ukufumana nantoni na efana neyakho kwikhompyutha? Sukuncama. Dlulisa amehlo ngeencwadana zokuqala okanye zokuvelisa kwilayibhrari okanye kwi-bookstore. Ezinye iikhathalogu zibandakanya iinkcukacha zokwakha ezifana nohlobo lweemithi zokusetyenziswa. Nazi iinkcukacha ezimbalwa zokuvelisa iikhathalogu zeeSears:
"Izindlu ezincinci ze-Twenty , Sears, uRobubuck 1926 House Catalog." Ulwazi lokwakha luquka imizekeliso ecacileyo yeendawo zangaphakathi kunye nezixhobo. Thenga kwi-Amazon
"Iindlovu, i-Roebuck Homebuilder's Catalogue" - I-Complete Complete Illustrated 1910 Edition. Imifanekiso eqingqiweyo eneenkcukacha zokwakha. Thenga kwi-Amazon
" Izindlu kwibhokisi, izindlu zanamhlanje ezivela kwiSears Roebuck," iSchiffer Publishing. Ukuzaliswa kweeNyathelo ze-1912 ikhathalogu yamakhaya. Thenga kwi-Amazon
Abakhi beendawo kunye nabanini-propati bavame ukucwangcisa izicwangciso ze-imeyile ezenziwe ngokwezifiso, bongeza iiplanga, ukunyusa iingcango, nokuguqula iinkcukacha ukulungiselela ukuthanda kunye neemfuno zakho.
Izicwangciso ze-imeyile ozifumanayo zingenakufana nekhaya lakho ngqo.
Hlola i ziThengiso
Ikhasi lekhathalogi yekhaya lakho lokuthumela iposi liza kunika ubuninzi beenkcukacha. Uza kufumana intengo yokuqala yokuthengisa indlu kunye neentlobo zezixhobo ezisetyenziswayo. Uza kubona izicwangciso eziphantsi kunye nomzobo olula wendlu. Usenokufumana iinkcukacha ezithile zokwakha kunye neenkcukacha.
Ngaba konke oku kubonakala ngathi kuninzi umsebenzi? Uyabheja! Kodwa ukuphanda i-home order order yakho kuyonwabile kwaye kuyamangalisa. Uyakuvuyela uhambo, kunye nendlela oya kuhlangana ngayo nabahlobo ababelana nabo ngentshiseko yamakhaya asebekhulile. Umnqweno omhle
Indlela yokuxelela uMcMansion kwiNdlu enkulu
Ngaba Indlu Yakho Neoclassical? Igalari yezithombe
Isibonakaliso kwiLwimi noLwazi
Imfazwe ye-Seelow Heights - iMfazwe Yehlabathi II
Amalungelo ezilwanyana v. Iinkonzo zoLuntu